Corporate Social Media Successga nke Ọma Chọrọ Ngwá Ọrụ SMM | Martech Zone
Ọ bụghị kwa mgbe na m na-agwa ndị mmadụ na ha ga-azụ a ngwá ọrụ… ma ọ bụrụ na ị na-ijikwa na-elekọta mmadụ media, ị ga-azụta a njikwa mgbasa ozi (SMM) ikpo okwu. Na nnukwu ụlọ ọrụ ahụ, ọ ka mma ka ngwá ọrụ ahụ bụrụ iji nyochaa mgbasa ozi mgbasa ozi maka nyocha nke ụlọ ọrụ gị, njirimara nke ndị na-eme ihe ike, na-ekwu banyere akara gị (ọ bụghị naanị hashtags ma ọ bụ nzaghachi ziri ezi, bipụtara na mgbasa ozi mgbasa ozi (na nsuso), na nkwalite) na mgbasa ozi mgbasa ozi (ma ụgwọ ma organic).
Ngwá ọrụ mgbasa ozi ọha na eze (SMM) na-emeziwanye mmekọrịta ọha na eze maka pasent 95 nke ndị ọrụ. Nke ahụ bụ nanị otu n'ime nchoputa sitere na akụkọ e bipụtara n'ọnwa gara aga: Njikwa mgbasa ozi mmekọrịta: Ngwaọrụ, usoro tact yana otu esi emeri, ma pụta ìhè na ọhụrụ infographic a.
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma, ịnwere ike ịzụta ngwá ọrụ nwere njikwa usoro, ịkọkọta ọnụ, njikọta, ọrụ ọrụ, ma ọ bụ ikikere otu iji mee atụmatụ ka mma ma bipụta mmelite mmekọrịta na ụzọ nyocha ma ọ bụ usoro njikwa nnabata.
VentureBeat gbatara 28 njikwa elekọta mmadụ azịza na ngwaahịa, uru, uru, ihe ịga nke ọma na nkwado iji nyere ndị na-ere ahịa aka nyocha ma mee mkpebi ịzụta SMM ha ọzọ.
Njikwa Mgbasa Ọha: Ngwaọrụ, actzọ… na Otu esi emeri
Tags: smmakụrụngwa na-ere ahịa mgbasa oziobibia-acha ọcha akwụkwọ